Iimephu zamahhala ezisuka kwihlabathi jikelele - i-Geofumed
Iimephu zamahala ezivela kwihlabathi jikelele
NgoJanuwari, 2012 Iiphotography, Internet kunye neBlogs
d-maps.com Ngenye yeenkonzo ezikhethekileyo esasifuna ukuzenza.
Kuyi-portal ephathekayo yamahhala ejolise ekunikezeni imephu yeliphi na indawo yehlabathi, kwiifom ezahlukeneyo zokulanda, ngokubaluleka. Umxholo uhlukaniswe kwiindidi zengingqi kwaye iqoqo elixabisekileyo leemephu zeembali zifakiwe.
Ihlabathi kunye nolwandle
Phakathi kweyona nto ibaluleke kakhulu, inokusetyenziswa kwiinjongo zorhwebo. Enye into: iifom apho zingalayishwa khona:
I vector yemveli: .wmf, .svg
Umtshini wokuyila imifanekiso: .cdr (Corel Draw), .ai (Adobe Illustrator)
Mhlawumbi iindawo eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zii-calcomapas okanye iimephu ezibonisa ukuba abantwana bacela esikolweni. Kodwa kunye neenjongo zokuyila imifanekiso, ukuba kusekho kwiifom zetekisi kuququzelela isimiso esichukumisayo.
Njengoko ndikubonisa imizekelo, kwimeko yaseMzantsi Melika:
Ukuba kwakukho imeko yaseColombia, kukho iimephu ze-50 ezikhoyo zokukhuphela, phakathi kweeNxweme, i-hydrography, imida, amasebe, izixeko eziphambili, i-contours, njl. Ngokuxhomekeke kwingingqi unokufumana iinkcukacha ezininzi ezifana nezendlela eziphambili, ukwahlula kamasipala kunye nokuphakama.
Ekugqibeleni lo mzekelo uvela eGlaris, eSwitzerland.
Ngokuqinisekileyo, inkonzo enkulu, iphepha elongezelelweyo lokongeza kwiintandokazi. Iimephu zamahhala zemibala yemifanekiso, kukho gata.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Plex.Earth yokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth Ngaba akukho mthethweni?
Post Next InfoGEO + InfoGNSS = MundoGEOOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Kwiimephu zamahala ezivela kwihlabathi jikelele"
YI CAGADA MOGOLICOS TARADO